Macalinka Barcelona Ronald Koeman ayaa ku nagaan doona hogaanka kooxda xilli ciyaareedka… – Hagaag.com
Macalinka Barcelona Ronald Koeman ayaa ku nagaan doona hogaanka kooxda xilli ciyaareedka…
Posted on 24 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Waxay umuuqataa in macalinka reer Holland Ronald Koeman uu kusii nagaan doono hogaanka kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo aadan, waana taas sababta uu u go’aansaday inuu ka tago kala bar kooxdiisa isla markaana uu ku tiirsanaado inta badan dhalinyarada isla markaana uu dhiso koox mustaqbalka ah.
Sida laga soo xigtay wargeysyada Isbaanishka, Barca ayaa ku dartay liiska laacibiinta baxaya xagaaga ee Mercato: Xiddiga reer Brazil Felipe Coutinho, goolhayaha reer Brazil Neto, daafaca reer France Samuel Umtiti, laacibka Danishka Martin Brathwaite, laacibka reer Bosnia Miralem Pjanic, iyo laacibka reer Brazil Matthews Pereira.
Wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee “Daily Star” ayaa sidoo kale soo wariyay in Barca ay diyaar u tahay inay ka tanaasusho howlaha Coutinho xagaaga soo socda oo ay ku rabto 40 milyan euro oo kaliya. Dhanka kale laacibka Pjanic, wuxuu umuuqdaa in xiriirkii uu la lahaa Koeman uusan wanaagsaneyn isla markaana uu xumaaday markii ciyaaryahanka reer Bosnia uu u sheegay wargeys Talyaani ah inuusan haysan daqiiqado badan oo ciyaar ah, wuxuu durbadiiba ka helay jawaab Koeman oo sheegay in arrintani ay aheyd in lagu xaliyo gudaha naadiga oo aan loo marin warbaahinta sidaa darteed waxaa lagu daray liiska dadka baxaya.
Wargeyska Isbaanishka ah ee Mundo Deportivo ayaa soo wariyay in Koeman uu doonaya inuu lahaado go’aanka ugu dambeeya ee qandaraasyada. Tababaraha reer Holland ayaa ka codsaday maamulka kooxda inay wada yeeshaan isku xirnaan ka hor inta aysan shaqaaleysiinin ciyaaryahan kasta oo la soo xareynayo, sidoo kale wuxuu doonaya inuu la hadlo ciyaaryahanka ka hor inta uusan saxiixin qandaraaska. Koeman – sida muuqata ma doonayo inuu noqdo sida tababarihii hore ee reer Spain Ernesto Valverde ee Barca, markii maamulku qandaraas la galay Malcom-ka reer Brazil, isagoo aan dalban laacibkaasi.